कुन भ्याक्सिनको कति प्रभावकारिता ? - Khabar
कुन भ्याक्सिनको कति प्रभावकारिता ?
info khabar ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार १९:०८
काठमाडौं । विश्वका दुई सयभन्दा बढी औषधी उत्पादन कम्पनीहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादनको प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तै, ब्रिटेनस्थित विश्वकै ठूला औषधि उद्योगमध्येको एक ग्ल्याक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कोभिड–१९ को खोपको विकास गर्न विभिन्न साझेदारहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संघठन (डब्ल्यूएचओ) ले अनुसन्धान गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार रूस की स्पूतनिक–वी, फाइजर÷बायोएनटेक र मोडर्नाद्वारा उत्पादित खोप ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभावकारिता रहेको जानकारी दिएको छ । अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेका भैक्सिनको औशत प्रभावकारिता ७० प्रतिशत मात्र भएको पाइएको डब्ल्यूएचओले बताएको छ । यो खोपको २० हजार २६० जनामा परीक्षण गरिएको थियो ।
जबकि अमेरिका की जोनसन एंड जोनसन, चीनको सिनोवैक र कैनसिनो, जापानको नोभाक्स आदि दोस्रो तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन् ।
अमेरिका औषधी कम्पनी माडर्नाको एमआरएनए आधारित वैक्सीन ९४.५ प्रतिशत असरदार रहेको बाइएको छ । बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एक औषधी कम्पनीले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाको प्रभाबकारिता ७० प्रतिशत मात्र रहेको बताइन्छ । रुसले उत्पादन गरेको स्पूतनिक–वी खोप सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको डब्ल्यूएचओले बताएको छ ।
यसका लागि १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राखे मात्र पुग्ने बताइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार कलेजोको क्यान्सरको कारक बन्ने उक्त भाइरसको सङ्क्रमण एचआईभीभन्दा पनि ५० गुना बढी रहेको हुन्छ । सन् २०१५ मा विश्वभरि २५ करोड ७० लाख मानिसमा हेपाटाइटिस बीको संक्रमण रहेको थियो ।